China FOTON C6 EVFOTON C6 EV orinasa sy mpanamboatra | Foton
Ny bus Foton C6 EV dia maneho ny hevitry ny bus izay mivezivezy tsara eo amin'ny arabe an-tanàn-dehibe eo anelanelan'ny tampon-tanàna na vondrom-piarahamonina, mamaha ny olan'ny fitaterana an-tanàn-dehibe amin'ny "kilometatra farany", mahatsapa ny fifandraisana tsy misy tohiny eo amin'ny gara sy ny fiarahamonina, ny arterial arabe ary ny fiarahamonina.
Refy ankapobeny 6530 * 2230 * 2800
Curb Weight 5.9 / 6.2T
Fahaizan'ny mpandeha / seza 36 / 11-17
Varavarana mpandeha Varavarana iray tsy mivily
Firafitry ny vatana Monocoque, fidirana ambany / Dingana roa
Ny bus Foton C6 EV dia maneho ny hevitry ny bus «mivezivezy kely» izay manapaka endrika tsara amin'ny arabe an-tanàn-dehibe eo anelanelan'ny sakana na vondrom-piarahamonina, mamaha ny olan'ny fitaterana an-tanàn-dehibe amin'ny kilaometatra farany teo. Miaraka amina endrika vaovao sy tsy manam-paharoa, manasongadina ny fahatsorana sy ny firaisan-kina izany, mitarika ny lamaody bus "micro-sirkulasi".
Ny bus Foton C6 EV dia maneho ny hevitry ny bus izay mivezivezy tsara eo amin'ny arabe an-tanàn-dehibe eo anelanelan'ny tampon-tanàna na vondrom-piarahamonina, mamaha ny olan'ny fitaterana an-tanàn-dehibe amin'ny "kilometatra farany", mahatsapa ny fifandraisana tsy misy tohiny eo amin'ny gara sy ny fiarahamonina, ny arterial arabe ary ny fiarahamonina. Miaraka amina endrika vaovao sy tsy manam-paharoa, manasongadina ny fahatsorana sy ny firaisan-kina izany, mitarika ny lamaody bus "micro-sirkulasi".
Motera maharitra motera mitambatra
Fitaovana rafitra fanaraha-maso fiara mizaka tena mandroso, miaraka amina asa ara-barotra an-taonany maro.
miaraka amin'ny famoahana fotoana 12 ka hatramin'ny 15 minitra isaky ny mandeha, ary ny halaviran'ny fiara amin'ny fiampangana tsirairay dia mahatratra 150km mahery, mitahiry hatramin'ny 80,000 RMB isan-taona ny vidin'ny solika.
Ny Foton dia manampy ireo mpandraharaha hanao ny drafitra fandidiana tsara indrindra amin'ny alàlan'ny famakafakana ny fizotran'ny fiaran'ny fiara sy ny famakafakana ireo loharanom-pahalalana momba ny fananganana fotodrafitrasa, ao anatin'ireto anton-javatra amin'ny antsipirihany ireto: fomba fitateram-bahoaka, maodely fandoavam-bola, vidiny isam-bolana, kilaometatra / andro, sns.
Foton dia manome ny mpandrindra drafitra an-tsipiriany amin'ny alàlan'ny fomba fiasa fiara, toy ny tanàna kely salantsalany.
Amin'ny alàlan'ny hetsika fampisehoana fiara, fiofanana momba ny mpiasa, fitarihana ny ekipan'ny ekipa, mikendry ny hanome sosokevitra sy vahaolana manokana ho an'ireo mpandraharaha i Foton. Torolàlana ho an'ny ekipa: Drafitra fananganana gara; fiofanana fitantanana fiaramanidina, ao anatin'izany ny fikojakojana ny fiara matetika; Fitantanana ny fanjifana angovo; Fiofanana amin'ny fandaharam-potoana amin'ny fiara, toy ny fahita matetika; drafitra fanovana mikorontana sy fandaharam-potoana amin'ny fiara lavitra. Fihetsiketsehana fampisehoana: fanadihadihana ny fangatahan'ny mpandraharaha; Famolavolana vahaolana momba ny vokatra; Sample & fampisehoana hetsika; Fanaraha-maso sy famakafakana data; Vahaolana farany novaina. Fiofanana momba ny mpiasa: NEV fanofanana fahalalana fototra; Fanofanana sy fikojakojana & fanofanana momba ny aretina; Fiofanana momba ny fahaizana mitondra fiara.